August | 2007 | Layma's World
Posted on August 31, 2007 by layma
Blog Day တဲ့
Blog Day ဆိုမှ
“ငါ” ဖွဖွလေးတွေးကြည့်တယ် ….၊Blog ဆိုတာဟာ….
IT နည်းပညာတွေ မျှဝေပေးနေတဲ့
HTML တွေကို edit လုပ်နေကြမယ်…….၊
ကဗျာတွေသီ စာတွေဆီလို့ …
လှလှပပလေး ရေးဖွဲ့ နေကြမယ် ……၊
ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးတစ်ခု …. ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်….
Blog ဆိုတာ ……ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်မယ် …..
ပြန်အထွက်မှာ သံယောဇဉ်တွေနဲ့လေးနေမှာစိုးတယ်……၊
သူတို့ အတွေးတွေ ၀င်လာတယ်….
သူတို့ အတွေးတွေနဲ့ငါနွေးထွေးခဲ့ပါတယ်….
ငါ့အရေးတွေနဲ့သူတို့ အေးခဲသွားမှာစိုးတယ်…..၊
Blog သစ်ပင် နဲ့ စလို့ 
Blog ကဗျာနဲ့နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်…..
Blogsphere ကြီး အဓွန့် ရှည်လို့ ….
August 31 တွေ မှန်မှန်လည်ပတ်နေပါစေ…….။ ။
ကိုဘုရင့်နောင်Blog day အမှတ်တရ တစ်ခုခု ရေးပေးပါရှင်….။
Filed under: Poem, Tag |	9 Comments »
Filed under:2in 1 style, Heart touching songs, That's what I wanna say |	9 Comments »
Posted on August 27, 2007 by layma
ပုဂံမှဇာတ်လမ်းများ(သို့ ) မှတ်တမ်းများ (၂) ။ ။
ဘုရား… ဘုရား…. ရက်စက်လှချည်လား…. မောင်ဘုရားရယ်… ၊
မောင်တော်ဘုရားဟာ … ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ ဖခင်အရင်းပါ … ၊ ထွက်ပြီးသားဆင်စွယ် ပြန်ဝင်ရိုးထုံးစံ မရှိသလို … မင်းတို့ ရဲ့ စကားဟာလဲ …. ပြင်ရိုးထုံးစံ မရှိဘူးဆိုတာ…. နှမတော်…. နားလည်ပါတယ်….မောင်တော်ရယ်….. ၊ ဒါပေမယ့် ဒီစကားကိုတော့ ပြင်လိုက်ပါ … မောင်တော်ရယ်… ၊ ပြင်ပေးပါ…. မောင်တော်မင်းမြတ်ရယ်…. ၊ ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ …. အပယ်ရတနာရဲ့ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့…. ဇနီး နဲ့သမီးကို ငဲ့ညှာသနားတဲ့အနေနဲ့ …. ပြင်ပေးတော်မူလှည့်ပါဘုရား ….၊ ဒီအမိန့် တော်ကိုဖြင့် နှမတော် မကြားခဲ့ဘူးလို့ …မှတ်ယူလိုက်ပါရစေ……မောင်တော်ရယ်…..။ မောင်တော်မင်းမြတ်ကို နှမတော် အမြဲ ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာ …. မောင်တော်သိပါတယ် … ။
ပသီမင်းသား ပဋိက္ခရား နဲ့သမီးတော်….. မေတ္တာမျှစဉ်အခါက …. မောင်တော်စေခိုင်းစရာမလိုဘဲ …ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး အနေနဲ့ …..၁၈ နှစ်အရွယ် ရွှေအိမ်သည် ကို ….မိန်းမသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို ….. ဘေးချိတ်ပြီး ….နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တာကို …. မောင်တော်အသိပါ ….။ မစားနိုင်မသောက်နိုင် … တမှိုင်မှိုင်တတွေတွေနဲ့… သလွန်ပေါ်ခွေနေရာက …လန်းဆန်းစပြုကာစ သမီးငယ်လေးကို ….“စောယွန်း”နဲ့လက်ဆက်စေမယ်ဆိုတာကတော့ ….နှိပ်စက်ရာမကျပေဘူးလား … ဘုရာ့ …..။ “စောယွန်း” ဆိုတာ ခြေတစ်ဖက် မသန်ဘူးလေ…..ဘုရာ့ … ၊ နှမတော်မှာ သူတစ်ပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို ….ကဲ့ရဲ့ နှိမ့်ချလိုတဲ့ စိတ်မရှိပါဘူး …ဒါပေမယ့် … တပင်တိုင်မြနန်းမှာ … ယင်ဖိုတောင်မသန်းစေဘဲ စံစားစေခဲ့တဲ့ …. ၊ ဖခင်ရဲ့ထက်မြက်မှု … မိခင်ရဲ့ သိမ်မွေ့ မှုတွေ နဲ့…. ရွှေအဆင်းလို တင့်တယ်လှတဲ့ …. သမီးတော်လေးကို… လက်ရုံးရည် ….နှလုံးရည် ပြည့်ဝတဲ့ … သူရဲကောင်းနဲ့လက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ … မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တပါ … မောင်တော်ရယ် ….။ နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာက…. “မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန်” တဲ့ …. ။ “စောယွန်း” ရဲ့ ဖခင်က “စောလူးမင်း” လေ… ဘုရာ့ …..၊ အရည်အချင်း တစ်စက်မှ မရှိတဲ့မင်း …. မောင်တော့်အပေါ် အမြဲ မကောင်းကြံခဲ့တဲ့မင်း ….. ရန်သူ့ လက်တွင်းက ကယ်ထုတ်လာတာတောင် …. မယုံမကြည်နဲ့ …. “ ကျန်စစ်သား ငါ့ကိုခိုးပါတယ် ” လို့ ….. အော်ခဲ့လို့မောင်တော်တောင် အသက်လုပြီး ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား …..။ ဒီလိုဆိုတော့ “စောယွန်း” ဟာ အနော်ရထာမင်းမြတ်ရဲ့ မြေးမို့ …. အင်မတန်ကောင်းတဲ့ မျိုးစေ့ပါလို့ ….. မောင်တော်က နှမကို ဖြောင်းဖျပေဦးမယ် … ။ အဖေနဲ့အဖိုး ဘယ်သူ့ သွေးကပိုနီးမလဲ လို့ သာ …. နှမတော် မေးပါရစေတော့ …။ မိန်းမဆိုတာ ယောက်ျားတွေကို …..ပံ့ပိုးပေးဖို့လူဖြစ်လာရတာမဟုတ်ပေမယ့်… ဇနီးဆိုတာကတော့ သူ့ ဘ၀ကို …. ခင်ပွန်းအတွက်လို့…. မှတ်ယူထားကြသူများ ဖြစ်လေတော့ …. ရတနာတို့သားအမိမှာ …. မောင်တော် စီမံတာ နာခံကြရမှာပါ …. ။ ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့ အမိန့် ကို …. ကလန်ကဆန် မလုပ် ၀ံ့သလို … အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ …. ခင်ပွန်းရဲ့ အစီအမံကို … ဇနီးကောင်းပီသစွာနဲ့…. ခေါင်းညိတ်လက်ခံပါ့မယ် … ဘုရာ့ …..။ တစ်ခုတော့ ဖွင့်ဟလိုက်ပါရစေ …. ကျန်စစ်မင်းရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး အနေနဲ့…. မောင်တော်ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုကို …. ထောက်ခံ အားပေး ….ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်နိုင်ပေမယ့် ….. ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ မိခင် “အပယ်ရတနာ” အနေနဲ့ …. မောင်ကြီးကျန်စစ်ရဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တော့ …. မောင်ဘုရားရဲ့ စီမံမှုကို …. လုံးဝ …. မကျေနပ်ပါဘူး …ဘုရာ့ ….။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြူရောင်အတွေး ….မိန်းမသားအတွေးသက်သက်သာ …။
၃။ Blog တွင်သုံးထားသော အရောင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ …………………………………..
“လေးမ” တွင် အရောင်စွဲမရှိပါ … အကြိုက်ဆုံးအရောင် … အမုန်းဆုံးအရောင် ဟူ၍ မရှိပါ …။ “လေးမ” အရောင်အားလုံးကို ….. ချစ်သည် … စိတ်ဝင်စားသည် … ။ အရောင်တိုင်းတွင် သူ့ တန်ဖိုးနှင့်သူရှိသည် … အစွမ်းကိုယ်စီရှိကြသည် … ထို့ ကြောင့် အရောင်အားလုံးကို …. တန်ဖိုးထားသည် … ။ သို့ သော် …. “လေးမ” ၏ အသုံးအဆောင်အများစုသည် ….. နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပြာနေကြသည် … ။ “လေးမ” ကျောင်းသူဘ၀က ….. စာမေးပွဲဖြေလျှင် ….. jury ၀င်လျှင် ….. အပြာရောင် ၀တ်စုံဖြင့် …. ၀င်လေ့ရှိသည် …။ အပြာရောင်သည် “လေးမ” ကို ကံကောင်းစေသည်ဟု …. မသိစိတ်တွင် မှတ်သားထားခဲ့သည် ။ ထိုမသိစိတ်က လွှမ်းမိုးဦးဆောင် နေသော အချိန်များတွင် …. “လေးမ”၏ အသုံးအဆောင်များ …. ပြာသွားကြသည် … ။ ထို့ ကြောင့် “လေးမ”၏ Blog တွင် ပြာသောအရောင်များ …. ပါဝင်လာကြသည် … ။ မြန်မာပြည် ဗိသုကာဘွဲ့ဝတ်စုံ၏ လိုင်းကြိုးသည် …. ခဲရောင် ဟုခေါ်သော ….. မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည် … ။ ထို့ ကြောင့် ခဲရောင်သည် …. ဗိသုကာတို့ပိုင်ဆိုင်သော အရောင်ဟု….. သတ်မှတ်ကာ ကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက ….. ခဲရောင်ကို မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော အရောင်ဟု ….. စွဲလန်းနေခဲ့သည် …။ ထိုမီးခိုးရောင်သည် …. ဗိသုကာ “လေးမ” ၏ Blog တွင် …. နေရာတနေရာ ရခဲ့သည် … ။ ဤသို့ ဖြင့်…. အဖြူ ၊ အပြာ ၊ မီးခိုးရောင်များဖြင့် ….. အခြေခံဖွဲ့ စည်းထားသော …. အခွံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် … ။
၄။ Blog ရေးသူတိုင်း လုပ်လေ့ရှိသည့်အတိုင်း “လေးမ” ၏ post များကို ကဏ္ဍများခွဲ၍ Label များတပ်ထားခဲ့သည် … ။
2 in 1 style – ကဗျာ တလှည့် စာတလှည့် ရေးသားထားသော စာများ……၊
Analysis – လေ့လာဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာ စာများ ……၊
Architecture – ဗိသုကာ ပညာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော စာများ……၊
Cartoons – ကလေးများကြိုက်သော …. လေးမ ကြိုက်သော စာရုပ်စုံများ …..၊
Flower – ပန်းစကား (သို့ ) ပန်းများနှင့် စကားပြောကြည့်ခြင်း ……၊
Link to the past – အတိတ်သို့ချိတ်ဆက်ခြင်း ….(သို့ ) တမ်းတခြင်း ……၊
News – သတင်း …..၊
Poem – ကဗျာ……၊
Preface – အမှာစကား …..၊
Seasonal Post – ရာသီစာ …..၊
Tag – ခင်မင်မှုဖြင့် သူတို့ တက် သမျှ…..၊
That’s what I wanna say – ပြောချင်သော စကားများ …..၊
Thinking from History – ရာဇ၀င်ထဲမှ အတွေးစများ (သို့ ) သမိုင်းကပေးသောအတွေးများ…..၊
Thinkings from novels – ၀တ္ထုဖတ်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သော အတွေးစများ …..၊
Thinkings from story – အတွေးပေးသော ပုံပြင်များ …..၊
Wondering – ဟိုတွေး …..ဒီတွေး ….ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေသောအခါ ရေးမိသော စာများ ….၊
ဖော်ပြပါအတိုင်း ကဏ္ဍများခွဲ၍ ရေးသားခဲ့သည် …..။ …..balar….balar…balar….။
ရှင်းလင်းပွဲကို သန်းခေါင်ကျော်အချိန်တွင် လက်ခုပ်တီး၍ နိဂုံးချုပ်ပြီးသကာလ ကြွရောက်လာကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ blogger များသည် “လေးမ” ခင်းကျင်းပြသထားသော ဓါတ်ပုံများနှင့် မှတ်တမ်းများကို ၀တ်ကျေတန်းကျေ ကြည့်ရှု၍ ပြန်သွားကြပါသည် …..။ ။
P.s . နောက်တခါအပြောင်းအလဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်လဲ ယခုကဲ့သို့ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ချင်လုပ်မယ် …. မလုပ်ချင် မလုပ်ဘူး ဟု …. “လေးမ” မှ တိကျစွာပြောကြားသွားပါသည် ….။
Filed under: Analysis, News, That's what I wanna say |	4 Comments »
Filed under: Analysis, News, That's what I wanna say |	3 Comments »
Posted on August 23, 2007 by layma
ကျွန်တော့်စိတ်တွေ “လေ” နေလို့ 
စိတ်တွေ “လေ” တဲ့အခါ
ဂျင်းဂျာကင်လေး ထပ်လို့ 
လမ်းမပေါ် ပြေးထွက်ချင်လိုက်တာ… ။
စိတ်ညစ်ရင် လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ… လမ်းပေါ်မှာ ကားမပါဘဲ လျှောက်သွားရင်း လေကောင်းလေသန့် တွေ တ၀ကြီးရှူသွင်းရင်း စိတ်ညစ်စရာတွေကို တ၀ကြီးပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရရင် ပေါ့သွားမှာပဲ…..။ လူးလာလှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ လမ်းပေါ်က ဘ၀တွေကိုတွေ့ ရင် ကိုယ့်ဒုက္ခက သေးသေးလေး ဖြစ်သွားကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ် … ပျော်စရာမြင်ကွင်းတွေကို တွေ့ ရင်လဲ အပျော်တွေ ကူးစက်သွားနိုင်တယ် … သတိထားကြည့်တတ်ရင် ရယ်မောစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုလဲ တွေ့ ရမယ်… သေချာတာ တစ်ခုကတော့ လမ်းများများလျှောက်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ မောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားနိုင်တယ် … ။ အတွေးတွေ နှိပ်စက်ခွင့် မရတော့ဘူး …။ ( လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ဆိုရင် အနွေးအကျီင်္လေး ဆောင်သွားဖို့ တော့ မမေ့နဲ့ နော် …. )
ကာတွန်းတွေ တဲ့ …
အသစ်တွေ လိုက်ရှာလို့ 
စာဖတ်ခြင်းသည် ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်လို့ဒီနည်းနဲ့စိတ်ညစ်တာသက်သာအောင် လုပ်တာလဲ ကောင်းတာပဲ…..။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကာတွန်းဖတ်ပြီး ရယ်မောလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့သွားနိုင်တယ်…. ခက်တာက ကာတွန်းတိုင်းသည် ဟာသမဟုတ်…..ရယ်စရာမကောင်း….။ Online ရရင် Blog တွေလိုက်ဖတ်နေရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်….။ အပြင်မှာ နာမည်ရနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အရေးတွေ…. အတွေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲ….. ဆွေးနွေးလို့မဲပေးလို့မရဘူး…..ရခဲ့ရင်တောင် သူတို့ စာတွေကို
ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့တော်ရုံလူမ၀ံ့ရဲပါဘူး….။ သူတို့ဘယ်လိုပြန်ဆွေးနွေးမလဲ ကိုယ်သိဖို့ ခက်တယ်…..။ Blog မှာ ဒီအခွင့်အရေးတွေ အကုန်ရတယ်…..။ ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ရေး….. ထင်သလို ၀င်ဆွေးနွေးသွားလို့ ရတယ်….. အတွေးတွေ ဖလှယ်လို့ ရတယ်….။ Blogger ကျင့်
၀တ်ဆိုတာကြီး လူတွင်ကျယ် မဖြစ်လာသေးခင်အထိတော့ အတွေးတွေ…. အရေးတွေ လွတ်လပ်နေဦးမှာပဲ…..။ အဲဒီဟာကြီး လူရာမ၀င်ပါစေနဲ့ ဦးလို့စိတ်ပုတ်စွာ ဆုတောင်းရမှာလား…..။ စိတ်ဝင်စားရင် cbox တွေလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦး…..။ မမြင်ဖူး…. မတွေ့ ဖူးကြပါပဲ ချစ်ခင်ရင်းနှီးပျော်ရွှင်စွာ နောက်ပြောင်နှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ မောင်နှမတွေနဲ့ဆဲဆိုရန်စ အငြင်းပွားနေကြတဲ့ လူတစ်စုကိုလဲ တွေ့ ရမယ်…..။ ကိုယ်က ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်……၊ လိုက်ဖတ်ပြီး…..ထိုင်ရယ်နေရုံပဲ…..။
music တွေနဲ့ နေကြည့်လိုက်တယ်တဲ့…..
သံစဉ်တွေနဲ့စာသားတွေထဲ
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ သီချင်းတွေ နားထောင်မလား….. ဆိုမလား….ကြိုက်တာသာလုပ်…..။ သီချင်းဆိုတာ အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲ…. ၀င်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်….. ထွက်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်…..။ သီချင်းတွေထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စာသားတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်တယ်…..။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ထိတဲ့သီချင်းတွေ လိုက်အော်လိုက်ရတာ သိပ်အရသာရှိတယ်…..။ နားထောင်ပါ….. ဆိုပါ….. စိတ်နဲ့ရင်ဘတ်ကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားလိုက်ပါ…..။ song source ကိုတော့တိုးတိုးဖွင့်နော်…. ဘေးလူတွေ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကုန်မယ်….။
ပို့ စ်တစ်ပုဒ်ရေးလို့ 
“လေးမ” စိတ်ညစ်ရင်လား……အင်း….. သန့် ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်…..။ အခန်းထဲမှာ ပွနေတာတွေ ရှင်းတယ်….. ဖုန်သုတ်တယ်…. ကြမ်းတိုက်တယ်….. ရေချိုးခန်းဆေးတယ်….. အားသွန်ခွန်စိုက် အသားကုန်ရှင်းလိုက်တယ်…..။ သိပ်ငိုချင်လာရင် အ၀တ်တွေ တပုံကြီးလျှော်ရင်း ငိုချလိုက်တယ်…..။ ရေချိုးခန်းကြွေပြားတွေ ပြောင်လက်နေအောင်….. လက်တွေပွန်းအောင် တိုက်ရင်း သီချင်းတွေအော်ဆိုလိုက်တယ်…..။ အ၀တ်ဗီရိုရှင်းရင်း ညစ်နေတာတွေ ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်…. သနပ်ခါးကျောက်ပြင်ကို သနပ်ခါးစတွေ ပြောင်စင်သွားအောင်တိုက်ချွတ်တယ်…..။ ခေါင်းဖီးတွေဆေး…. ခေါင်းစည်းတွေလျှော်….. လုပ်စရာတွေ ကုန်လို့ မှ စိတ်မပြေသေးရင် ခေါင်းလျှော်ရေချိုးပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့အိပ်ရာပေါ်တက်…. စောင်ခြုံပြီး အိပ်နေလိုက်တယ်…..။
စိတ်ညစ်ရင် ကဗျာရေး…. စာရေး…. အတွေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရတယ်…..။ အရေးတွေ ကောင်းစရာမလိုဘူး…. အတွေးတွေလှစရာမလိုဘူး….. အေးအေးဆေးဆေး ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးချင်တာတွေသာရေး…. ဘာမှတွေးမနေနဲ့ …. စိတ်ရှိသလိုသာရေး….. မကျေနပ်လို့အော်သွားတဲ့သူရှိရင်လဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်…….။ မငြိမ်ချင်ရင် ပြန်အော်လိုက်….။ blog မှာ ပျော်စရာကြီး….. သိလား….. Blog မရှိသေးရင် လုပ်လိုက်တော့….သူငယ်ချင်း ….။ ။
Filed under:2in 1 style, Poem, Seasonal Post, That's what I wanna say |	10 Comments »
Posted on August 22, 2007 by layma
“အရောင်များ” ဆိုပြီး…အရောင်တွေ အကြောင်းရေးတုန်းက…ဘက်မလိုက် အရောင်လေးတွေ အကြောင်း…ထည့်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး…..။ အဲဒီအရောင်လေးတွေရဲ့ ဖြစ်တည်ပုံ နဲ့ … သူတို့ ရဲ့ သဘောတရားလေးတွေကို သဘောကျလို့… သူတို့အကြောင်းကို…သက်သက်ရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားခဲ့ပြီး … အခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်….။
neutral color ၃ ရောင်ရှိပါတယ်….။ ဓါတ်ပြယ်နေတဲ့ အရောင် (သို့ ) ဘက်မလိုက် အရောင်လို့ ပဲ ခေါ်ကြပါစို့ ….။ White , Black , Gray ပါ….။ ဘာလို့neutral ဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့…. အရောင်တွေ ဆတူဖြစ်နေလို့ …. အရောင်အားတွေမျှနေလို့ …. ဘယ်အရောင်ကိုမှ ကိုယ်စားမပြု … အားမပေးတဲ့ … ကြားနေအရောင် ဖြစ်နေလို့ ပါ….။
ဆန့် ကျင်ဘက် အရောင်၂ ခု ( အရောင်စက်ဝိုင်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေတဲ့ အရောင်တွေ……) ကို ဆတူရောလိုက်ရင် Gray color ရပါတယ်….. စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ရင် ရေဆေး အနီ နဲ့အစိမ်းကို ဆတူရောပြီး မွှေလိုက်ပါ…. မီးခိုးရောင်….ခဲရောင် ဆိုတဲ့ အနီဘက်ကိုလဲ အားမသာ အစိမ်းလို့ လဲ ပြောလို့ မရတဲ့ ကြားနေအရောင်လေး ရလာပါလိမ့်မယ်….။ အရောင်တွေ ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အခြေခံအရောင်တွေ ဖြစ်တဲ့…. မူလ အရောင်လို့ လဲ ခေါ်တဲ့… red , yellow နဲ့blue တို့ ကို ဆတူ ရောလိုက်ရင်တော့ ဓါတ်ပြယ်နေတဲ့… ဓါတ်မျှနေတဲ့… အနက်ရောင် ကိုရပါတယ်…..။ ဒီသဘောအတိုင်းပဲ……… ရောင်စဉ် ၇ ခု အညီအမျှပါဝင်နေတဲ့ … အဖြူရောင်ဟာလဲ … ဘက်မလိုက် … ကြားနေ အရောင် … ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်…..။
ဒီဇိုင်းမှာ အရောင်ရှိတဲ့ အရောင်တွေက အရေးပါသလို…. အရောင်မရှိတဲ့ ဘက်မလိုက်အရောင်တွေကလဲ elements တွေကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အရောင်တွေအဖြစ် အလွန်အရေးပါ ပါတယ်…..။ ။
Ref: Architecture: Drafting and Design ; Donald E.Hepler, Paul R. Wallach , Dana J. Hepler
Filed under: Analysis, Seasonal Post |	5 Comments »
Posted on August 20, 2007 by layma
ငိုလို့ရွဲနေတဲ့
ငါ့ အလှကို …
မှေးစက်လို့အိပ်ကုန်ကြပြီလား….။ငါ့နံဘေးမှာ
ကီးဘုတ်သံ တချက်ချက်ကလွဲလို့ 
ဘာသံမှမရှိ တိတ်ဆိတ်ခြင်းအတိနဲ့ 
တစ်ယောက်ထဲ မင်းထားခဲ့ချိန်တွေ” လို့ 
သူတို့ က ဆိုကြဦးမယ်လေ….။
၁၂ နာရီကျော်လို့ .
ဟိုဘက်ကို ၂ နာရီကူးသွားခဲ့ပြီ….
notebook ဘေးက ဓါတ်ပုံလေးကို
Filed under: Poem |	9 Comments »
ဆရာမ “ဂျူး”က “လေးမ” အကြိုက်ဆုံး ၊ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာရေးဆရာများထဲမှ တစ်ဦးပါ…..။ ဆရာမ ရေးတာဆိုရင် လုံးချင်း ၊ ၀တ္ထုတို ၊ရှည် ၊ ဆောင်းပါး လက်လှမ်းမီသလောက် … အဆင်ပြေသလောက် … ဖတ်ဖြစ်တယ်….။ “ အမှတ်တရ ” က စဖတ်ဖြစ်တာ…..။ ဆရာမရေးတဲ့ ပုံစံကို… သိပ်ကြိုက်တာ…..။ ဗဟုသုတ စုံတာကိုလဲ သဘောကျတယ်……။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို သေချာရေးပြနိုင်တာကိုလဲ ကြိုက်တယ်…..ဖတ်ရသမျှ ရသ အပြင် ဒေသန္တရဗဟုသုတ ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေကိုလဲ အပိုဆု ပေးသေးတယ်…….။ ဆရာမရဲ့ အရေးအသားတွေကို စွဲစွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တဲ့ … စာဖတ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ … ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတဲ့ ၊ ခံစားမိတဲ့ … အချက်လေးတွေ ရှိတယ်…….။ ဆရာမပေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေမှာ……. တာဝန်မယူတတ်သော ယောက်ျားများ နဲ့ကြံ့ခိုင်သော မိန်းမများ ( အားကျ စံနမူနာ ထားလောက်သော မိန်းမများ ဟု မဆိုလိုပါ )…..ကို မကြာခဏတွေ့ ရတတ်ပါတယ်…….။
“ကြယ်ကြွေတို့ ရဲ့ အတောင်ပံ” မှ
“နှစ်ဦးလုံးမှားတဲ့ကိစ ။ အပြစ်ဒဏ်ရရင် ညီတူညီမျှ ရရမှာပေါ့ ။ အခုတော့ ကာယကံရှင်တစ်ယောက်က အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်တောင် မထွက်ရဲဘဲ ပုဝပ်နေရချိန်မှာ အဓိက ကာယကံရှင်ကြီးက ဘုရားသွားကျောင်းတက် မျက်နှာထားတစက်မှမပျက်။ အပြစ်လွတ်နေရောလား ။” (မနှင်းမှုန်)
ဧည့်ပရိတ်သတ်အလယ်မှာထိုင်လျက် လက်ရှိနေထိုင်သောရပ်လိပ်စာ ၊ အလုပ်အကိုင် လူမှုရေး စသည်တို့ ကို ဒိုင်ခံဖြေပေးနေသော လူငယ်သည် အမေဖြစ်သူ တချိန်က ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အရှက်တို့ ကို တစ်စချင်း တစ်လွှာချင်း ပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးနေသလိုပါပဲ ဟု မနှင်းမှုန်တွေးနေမိသည် ။
“……..မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့မနှင်းမှုန်ဆိုတဲ့ မိန်းမဟာ အမှားတွေ အမဲစက်တွေနဲ့ ပါ ။ ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တော့ မနှင်းမှုန်ဟာ စံပြပါပဲ ၊ မေမေကြောင့် ကျွန်တော် အခုလို လူရာဝင်တဲ့သား ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ” ( ဒေါက်တာမင်းဥာဏ် )
အိမ်ထောင်ရှိ ယောက်ျားတစ်ဦး၏ မဆင်ခြင်မှုကြောင့်… တာဝန်မယူမှုကြောင့် … ရလာတဲ့ သားတစ်ယောက်ကို … သူမ၏ ချစ်သူကိုလဲ ဒုက္ခမပေးဘဲ … တစ်ယောက်ထဲ အခက်အခဲကြားကနေ … လူလားမြောက်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့သော… မနှင်းမှုန် ၊ အမေ၏ စိတ်
ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းရေးအတွက် … သနားကြင်နာစွာခြင်းကြီးစွာဖြင့် ဖေးမခဲ့သော သား….. နှင့် ညနေခင်း ခရမ်းခင်းက အပြန် … အဖော်တွေနဲ့ဝေးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးကို ကိုယ့်ရွာသားချင်းဆိုတဲ့ … စာနာစိတ်မရှိခဲ့တဲ့ ဦးစံလှ…. တို့ ကို ရေးဖွဲ့ ထားသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်….။
“ စောင့်နေမယ်လို့မပြောလိုက်ဘူး ” မှ
“ ဒီကလေးကို မမမွေးချင်တယ် ။ လက်ထပ်လိုက်ရအောင်ပါ လို့သူ့ ကို ဒူးထောက်ပြီး တောင်းပန်နေတဲ့ အချိန်တွေတုန်းက သူ့ အာရုံထဲမှာ ရှိနေတာက ကာဒစ်ဖ် တက္ကသိုလ်မှာ
ဘွဲ့ လွန်တက်ဖို့ ပါ….” ( ခက်စိမ်းနွယ် )
“….အမှန်ကို အဲဒီတုန်းကတည်းက မမမြင်သွားခဲ့တာ ။ ဟန်သာဆိုတာ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား ။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်သွေးကနေဖြစ်တဲ့ ရင်သွေးလေးကို အလွယ်တကူ သတ်မိန့် ပေးခဲ့တဲ့လူ ။ အပေါ်ယံက ရွှေမှုန်ကြဲပြီး အထဲမှာ နောက်ချေးတွေနဲ့ ရွံစရာကောင်းတဲ့လူ ။ အဲဒါညီမဆရာရဲ့ တကယ့်အဖြစ်မှန်ပဲ ” ( ခက်စိမ်းနွယ် )
ဒီဝတ္ထုမှာ………… ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော … ဒေါက်တာဟန်သာ ဆိုသော ပညာတတ် ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ … တာဝန်မယူမှုကို … ကြံ့ကြံ့ခံပြီး … ဘ၀ကို အရှုံးမပေးဘဲ တိုက်ပွဲ
၀င်ခဲ့သော … ခက်စိမ်းနွယ် ဟူသော အမျိုးသမီးကို တွေ့ ခဲ့ရပါသည်…..။
“ ကျွန်မ၏ သစ်ပင် ” မှ
“ တစ်ခါတုန်းက မင်းမေးသလို ငါ့ကို မေးလေ ၊ ငါတို့ဘာကြောင့် ကွဲသွားတာလဲလို့မေးလေ ၊ ဘာဖြစ်လို့ လဲ သိလား…. အဲဒီနေ့ တုန်းက ငါ သူ့ ကို….၊ သူ့ အိမ် အလည်သွားရင်း သူတောင်းပန်နေတဲ့ကြားက……” ( အုပ်စိုး၏ ဖေဖေ)
ဖေဖေက မိန်းမတစ်ယောက် အပေါ် မှားခဲ့တာနဲ့ ပဲ အဲဒီမိန်းမက ကျွန်တော့်အပေါ် ထပ်မှားဖို့ကြိုးစားမယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မယုံနိုင်ဘူး ဖေဖေ…။ ( အုပ်စိုး)
“ ….မင်းတွေးတဲ့ ဥယျာဉ်မှူးတွေ ၊ သစ်ပင်တွေ မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး ၊ အတာဟာ ကိုယ့်အတွက် သစ်ပင် တစ်ပင် ဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သစ်ပင်တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ် အရိပ်ခိုလှုံချင်တဲ့ ၊ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ သစ်ပင် တစ်ပင်ပဲ ။ ကိုယ် အဲဒီသစ်ပင်ကို လိုချင်တယ် ၊ ဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူး….” ( ဒေါ်နီနီဇော် )
အဖေလုပ်တဲ့သူရဲ့ တာဝန်မယူမှုကို … အပြစ်မဆိုခဲ့ပေမဲ့ … သားဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့ အချိန်မှာ ဒါဟာလက်စားချေတာပါလို့… အစွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ … ၂ ခါရှုံး မိန်းမတစ်ဦး….. ၊ အဖေကို ချစ်သော …. ဂီတကိုချစ်သော…. ထိုမိန်းမကိုလဲ ချစ်သော…. သို့ သော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရင်ဆိုင်ရန် သတ္တိ မရှိသော….အုပ်စိုးဟူသော အဆိုတော်တစ်ဦး တို့ ကို … ဂီတနှင့် ရောမွှေရေးဖွဲ့ ထားသော ၀တ္ထု ဖြစ်သည်….။
“ အမှတ်တရ ” မှ
“ မောင်က လိုက်ခဲ့ပါဟု ခေါ်တုန်းကလည်း မောင့်ဘေးမှာ ကျွန်မပါသည် ။ မောင်က နေရစ်ခဲ့ဟု ဆိုပြန်တော့လည်း မောင် စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်မည့် စာတစ်စောင် ၊ စကားတစ်ခွန်းမျှ မောင်မကြားရစေဘဲ ကျွန်မ ငြိမ်သက်စွာ နေရစ်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ ။ အဲ့သည် အထိ ကျွန်မ မောင့်ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါသည်….” ( ဒေါက်တာ စုစုထွေး )
“…. . နင်ကိုယ်တိုင် ဒီဇာတ်သိမ်းမျိုး ဖန်တီးပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား ။ တကယ်ဆို နင် ငါ့ကို ပါးရိုက်ပစ်လိုက်ပါလား ။ နင်နဲ့ငါနဲ့အများအမြင်မှာ လင်မယားပဲ ၊ နင့်ဘက်က လုပ်စရာ အများကြီး ….” ( မောင်)
“မောင်” ငှားထားသော နန်းရှေ့က အိမ်ကလေးတွင် မကြာခဏ ဖြူစင်စွာ အတူနေထိုင်
လို့ဆေးကျောင်းသားဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို ရေးထားပါတယ်….။ ဘယ်လောက်ပဲ ဖြူစင်တယ်ပြောပြော အဲဒီမိန်းမဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမြင်မှာတော့ မဖြူစင်တော့ပါဘူး……။ ဒီတချက်နဲ့ တင် ဒီမိန်းမကို လက်ထပ်ဖို့ သင့်နေပါပြီ….။ ဒါပေမယ့် သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ထိုယောက်ျားက လက်မထပ်ခဲ့ပါဘူး….။ သူ့ ကိုခြေရာချင်း မတိုင်းမဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ ပြီး မိန်းမဆန်တဲ့ ရိုးရိုးအအ မိန်းမ တစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသတဲ့….။ ကြုံတုန်း သတိပေးချင်တာက … ယောက်ျားအများစုရဲ့ စိတ်ကို သတိထားကြည့်ရင် … မိန်းမ ဦးဆောင်တာ ခံရမှာ … သိပ်ကြောက်ကြတယ်….. ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေကို မိတ်ဆွေ…၊ သူငယ်ချင်း…၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖြစ်နဲ့လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ … ဇနီးအဖြစ်တော့ မစဉ်းစားရဲကြဘူး….. လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး…… တချို့ တွေပေါ့နော်…။
“အမှတ်တရ” ဟာ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်မခံနိုင်သော ….၊ အလွန်အန္တရာယ်များသော နေထိုင်မှုပုံစံ…..အတွေးအခေါ် … အရေးအသားများကြောင့် … စာပေလောကမှာ အတော်ဂရက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်…..။ တလောက ပန်းဆိုးတန်းက စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်မှာ မေးကြည့်တော့ … ထပ်မံ ထုတ်ဝေခွင့် မရတော့တဲ့ အတွက် မိတ္တူပဲ ရှိပါတယ် ဆိုလို့… မိတ္တူစာအုပ်ကို ၂၀၀၀ ပေးပြီး ၀ယ်လာခဲ့ရတယ်….. (ထုတ်ဝေခွင့်မရတာလား…. မထုတ်ဝေတော့တာလား လေးမ မသိပါ…စာအုပ်ရောင်းတဲ့ လူကြီးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းရေးထားတာ….) ။
“လေးမ” စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့ ဆရာမ “ဂျူး” ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက တချို့ ကို မျှဝေ တာပါ…..။ “လေးမ” တွေ့ ရသလောက် ယောက်ျားတော်တော်များများ ( အထူးသဖြင့် သမီးရှိတဲ့ ဖခင်တွေ ) ကတော့ ဒီဝတ္ထုတွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး…..။ “လေးမ” ကတော့ ဒီလိုစာတွေဖတ်ရတာ ပညာရတယ်…..။ “လေးမ” ရဲ့ အမြင်သက်သက်ပါပဲ….။ ကောင်းခြင်း…. ဆိုးခြင်း ဆိုတာ ဖတ်တဲ့သူက သတ်မှတ်တာပါ…..။ “ အမှတ်တရ” ကို ဖတ်တော့ “လေးမ” ၁၆ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်….. ဒါပေမယ့် လေးမ သူတို့ ကို အားကျ အတုခိုးတဲ့ စိတ်မျိုး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး….. စုထွေး ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ မောင် ဆိုတဲ့လူကို ဓါးနဲ့ နုတ်နုတ်စင်းပစ်ချင်ခဲ့တယ်…. ယောက်ျားတချို့ ရဲ့ စိတ်ကိုလဲ သိပ်ကြောက်သွားတယ်…။ ဒီစာအုပ်က ပါးပါးလေးဆိုပေမဲ့ အတော်ဆင်ခြင်စရာ များပါတယ်….. ဆက်ရေးရင် သိပ်ရှည်သွားမှာစိုးလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်…..။ ။
P.s. တာဝန်မယူသော ယောက်ျားများကို ရွေးထုတ်ပြလို့လည်လည်လာတဲ့ ယောက်ျားသားများ ဒေါသမပွားကြပါနဲ့ ….။ “ဖောက်ပြန်သော မိန်းမများ” ကို ဆက်ရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် …. အမြည်းပေးရရင်တော့ ဆရာဒဂုန်တာရာ မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ “မေ” ….။
Filed under: Thinkings from novels |	4 Comments »
Filed under: That's what I wanna say |	4 Comments »